Caves Glowworm any Nouvelle Zélande
Fantatra amin'ny iray amin'ireo zava-mahasarika voajanahary tsara indrindra any Nouvelle Zélande, mandehana mitaingina sambo mamaky ny grotto worm, gaga amin'ireo glowworm majia an'arivony ary lasa anisan'ny tantaran'ny kolontsaina sy voajanahary 130 taona mahery.
Lava-bato Waitomo Glowworm
Oceania, faritra iray mamakivaky ny hemispera atsinanana sy andrefana eran'izao tontolo izao, dia manana firenena nosy kely maro. Nouvelle-Zélande dia iray amin'ireo firenena lehibe indrindra eto Oseania miaraka amin'ny Nosy Avaratra sy ny Nosy atsimo ho toy ny tanety roa lehibe. Iza no afaka nieritreritra fa ity tany mitokana ity dia hanana zavatra akaikin'ny planeta hafa?
Ny lava-bato manerana an'izao tontolo izao dia mistery amin'ny ankapobeny izay tsy gaga ny natiora fa ny fitsidihana an'i Glowworm Caves any Nouvelle-Zélande dia mbola hahagaga anao ihany.
Taona an-tapitrisany maro lasa izay ity rafitra vatosokay mahatalanjona ity dia niforona tao anatin'ireo firafitra sarotra antsoina hoe Zohy ao Glowworm, izay iray amin'ireo toerana be mpitsidika indrindra ny nosy avy amin'ireo mpizahatany manerantany. Ity firenena tsara tarehy antsoina hoe New Zealand ity, izay manana ny anarany avy amin'ny teny holandey, dia manana hatsarana an-tanety toa izay ambaniny. Ary toy ny feon'ny anarany ihany, azo antoka fa toerana misy tsy ampoizina maro izy io.
Taratasy fangatahana visa any Nouvelle Zélande mamela ny mpitsidika amin'ny firenena rehetra hahazo izao New Zealand eTA (NZETA) amin'ny alàlan'ny mailaka nefa tsy mitsidika ny masoivohon'i Nouvelle Zélande. Manoro hevitra amin'ny fomba ofisialy an'i New Zealand Visa na New Zealand ETA an-tserasera izao ny governemanta New Zealand fa tsy handefa antontan-taratasy. Azonao atao ny mahazo NZETA amin'ny famenoana takelaka ao anatin'ny telo minitra amin'ity tranonkala ity. Ny hany takiana dia ny fananana carte debit na carte de crédit ary id mailaka. ianareo tsy mila mandefa ny pasipaoronao ho an'ny fametahana visa. Raha tonga any Nouvelle-Zélande ianao amin'ny alàlan'ny sambo Cruise Ship, dia tokony hizaha ireo fepetra momba ny fahazoana mandray ny ETA New Zealand Fahatongavan'ny sambo fitsangantsanganana any Nouvelle Zélande.
Ny lava-bato Waitomo, rafitry ny lava-bato, dia lava-bato goavam-be any amin'ny Nosy Avaratry New Zealand>. Ny toerana dia misy lava-bato maromaro toy izany izay manintona mpizahatany ao amin'io faritra io. Ireo lava-bato ireo, izay nonenan'ny vahoaka Maori voalohany, izay olona tsy mahay mandanjalanja any Nouvelle Zélande, dia loharano iray nahasarika ny fizahan-tany nandritra ny taonjato maro.
Ny tena manintona any amin'ny faritra dia ny zohy Waitomo Glowworm sy ny zohy Ruakuri, izay miasa miaraka amin'ireo mpizahatany mandritra ny taona. Ny toerana dia nahazo ny anarany avy amin'ny fiteny Maori nentim-paharazana midika lavaka lehibe misy rano. Fanatrehan'i karazana bibikely an-jatony izay tafavoaka velona ambanin'ny tany amin'ny toe-javatra toa tsy onenana miaraka amin'ny fanaovana ny toerana ho tsara tarehy mahatalanjona dia iray amin'ireo zava-mahatalanjona mahafinaritra amin'ny natiora.
The Zohy ao Glowworm, araka ny niantsoana azy ireo, manazava ny ambanin'ny tany ambanin'ny maizina amin'ny manga, miaraka amin'ny fisehoan-javatra mitranga noho ny fisian'ny New Zealand Glowworm, karazana iray izay tsy miankina amin'ny firenena. Ireo zavaboary bitika ireo dia manaingo ny valin'ny zohy amin'ny isa tsy tambo isaina ka mamorona lanitra velona misy jiro manga mamirapiratra.
Zohy mamirapiratra mamirapiratra, toa ny habakabaka avy amin'ny tany
Vorona sy biby any Nouvelle-Zélande.
Miaina ny lava-bato Glowworm
Misy fomba samihafa hikarohana ireo lava-bato any Glowworm. Ny iray amin'ireo fomba tsy manam-paharoa dia ahitana ny rafting blackwater amin'ny riaka mikoriana toy ny ony ambanin'ny tany. Ny rafting blackwater dia iray koa amin'ny fomba fandinihana ny Arachnocampa luminosa, ilay karazana niteraka ny trangan-javatra toy ny tselatra, miakatra amin'ny fomba fijery akaiky. Na dia toa hafahafa aza ny hevitr'ireto bibikely kely ireto izay mahatonga ilay tara-pahazavana manga ao anatin'ny grotto amin'ny voalohany, fa ny fijoroana vavolombelona amin'ity tranga tsy manam-paharoa ity dia azo antoka fa tsy zavatra kanto fotsiny.
Fomba iray hafa hijerena ireo zava-mahatalanjona ambanin'ny tany ireo amin'ny alàlan'ny fitsangantsanganana an-tsambo izay alehan'ny sambo manaraka ny rano anaty zohy raha gaga ireo mpitsidika ny zava-mahatalanjona hita maso. Ny fitsangantsanganana an-tsambo dia voalamina ho toy ny fizahan-tany Waitomo Caves izay afaka manome fahatsapana bebe kokoa ny fijerena akaiky ny habakabaka feno kintana manga lavitra. Na dia malaza manerantany aza ny zohy vatosokay noho ny firafitra sy ny firafitra ary ny jeôlôjia miavaka Ny lava-bato Waitomo dia azo antoka fa iray amin'ireo karazana manolotra ny hatsaran-tarehiny mahatalanjona.
Amin'ny toerana maizina indrindra ao anaty grotto ny jiro velona kely amin'ny valin-drihana dia manjelanjelatra indrindra amin'ny manga. Tsy zavatra tsy ilaina ve?
Lesona kely momba ny tantara
Fananganana vatosokay mahafinaritra
Betsaka ny lava-bato anafara maherin'ny 300 ao amin'ny faritry ny Nosy Avaratra any Nouvelle-Zélande. Ny fiforonan'ny vatosokay mahafinaritra dia biby fôsily, zavaboary ary vatohara avy any an-dranomasina. Ny stalactites, stalagmites ary karazana firafitry ny lava-bato dia noforonina avy amin'ny rano mitete avy amin'ny valindrihana ao anaty lava-bato na renirano mikoriana ao anatin'ny lalan'ny zohy, ka teraka ireo formations miavaka ireo.
Amin'ny salan'isa, stalactite dia maharitra an-jatony taona mamboly metatra toratelo monja. Ny rindrin'ny zohy dia voaravaka voninkazo haran-dranomasina sy karazan-drafitra maro hafa, noho izany dia manao ekôstôlika ambanin'ny tany ho azy.
Andro iray any Waitomo
Ny fitsangatsanganana an-tsokosoko any Waitomo dia voalamina miaraka amin'ny drafitra iray tontolo andro, miaraka amin'ny fitsangatsanganana amina tohatra mitsangana vita amin'ny vatosokay izay mamakivaky ambaratonga telo. Ny haavon'ny ambaratonga rehetra dia mampiseho famolavolana ireo lava-bato miaraka amin'ny fitsangantsanganana miafara amin'ny reniranon'i Waitomo ao anatin'ny lava-bato Glowworm.
Misy safidy maromaro handany iray andro any amin'iny faritry ny Nosy Avaratra any Nouvelle Zélande iny misy safidy tsara maro hijanonana eo akaikin'ny lava-bato Glowworm.
Misy safidy maromaro handany iray andro any amin'iny faritry ny Nosy Avaratra any Nouvelle Zélande iny misy safidy tsara maro hijanonana eo akaikin'ny lava-bato Glowworm. Ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny tranainy indrindra ao amin'io faritra io dia ny hotely Waitomo Caves hita minitra vitsy monja avy eo amin'ilay toerana misy vatosokay, izay nalaza noho ny firafitra Victoria vaovao tamin'ny taonjato faha-19.
Ny lava-bato Ruakuri, izay hita ihany koa ao amin'ny distrikan'i Waitomo, dia iray amin'ireo lava-bato lava kokoa ao amin'ny faritra misy manintona maro, ao anatin'izany ny fananganana vatosokay sy ny lalan-johy. Ireo vohikala goavambe ao Ruakuri Caves dia misy Ghost Passage, zavatra misitery toa ny feony. Ity lava-bato ity dia malaza amin'ny riandrano ambaniny, ony ary stalagmites, izay fitambaran-mineraly sarotra mihantona amin'ny valindrihana ao an-johy, na amin'ny teny tsotra dia zavatra hafa mitovy amin'ny labozia maranitra manatrika ny tany. Miaraka amin'ny fisarihana maro be manodidina, ny dia feno fahafinaretana ho any amin'ity faritr'i Nouvelle-Zélande ity dia azo antoka fa hanomana izany.
Tokony hahita riandrano any Nouvelle Zélande.
Hamarino fa efa nohamarininao ilay fahazoana mandray anjara amin'ny eTA New Zealand anao. Raha avy amin'ny a ianao Firenena Visa Waiver avy eo azonao atao ny mangataka eTA na inona na inona ny fomba fitetezam-paritany (Air / Cruise). Olom-pirenena Etazonia, Olom-pirenena eropeana, Olom-pirenena Hong Kong, ary Olom-pirenena anglisy afaka mangataka amin'ny Internet ho an'ny New Zealand eTA. Ny mponin'i United Kingdom dia afaka mijanona ao amin'ny eTA New Zealand mandritra ny 6 volana raha ny hafa kosa mandritra ny 90 andro.
Azafady mba mangataka amin'ny New Zealand eTA 72 ora mialoha ny sidinao.